Ukuhlala endaweni yewayini eWest Styria - I-Airbnb
Ukuhlala endaweni yewayini eWest Styria
Wies, Styria, i-Austria
Ifulethi lifakwe kahle kakhulu, liphakathi nendawo, kodwa lisathule. I-Wies itholakala esifundeni saseSchilcher (iwayini), kodwa izintaba ezizungezile, okulula kakhulu ukuhamba ngezinyawo, kanye neGraz njengenhloko-dolobha yesifundazwe, ingafinyelelwa ngokushesha. Azikho izihambeli ezinezithuthuthu!
Siyakwamukela maphakathi neSchilcherland eStyria!
I-West Styria iseyiphuzu langaphakathi.
Indawo enhle enamagquma efika e-Koralpe (2140m) ikumema ukuthi uhambe ngezinyawo noma ugibele intaba, uyenge ukudla okujwayelekile newayini ukuze ujabulele futhi ukunethezeka kwesaga sezwe lakithi kukusiza ukuthi uphumule unomphela.
Leli fulethi limaphakathi ne-Wies, isikhungo somphakathi wabantu abangu-4500, elihlinzeka ngakho konke ngokwengqalasizinda (odokotela abajwayelekile, odokotela bamazinyo, ikhemisi, iposi, amabhange, izitolo zokudla, ababhaki, amagalaji, ama-inns, ama-Roman Catholic. isonto, amaphoyisa ...). Ngemuva kwendlu kukhona indlela yokuhamba / yokuhamba ngebhayisikili noma umfudlana okumema ukuthi uhlale futhi, ehlobo, ukubhukuda (ubukhulu obungu-20 ° C). Inekamelo lokulala, igumbi lokuphumula kanye negumbi lokudlela kanye nendlu yokugezela enobhavu / indlu yangasese kanye nekhishi. Umbhede owengeziwe wengane ungenzeka. Ukufinyelela kunge-balcony yokhuni, ehlanganiswe namaqabunga omvini, lapho kukhona nendawo yokuhlala yasekuseni noma yekhofi. Indawo yokupaka iyatholakala yemoto eyodwa.
Ingadi ingasetshenziswa kuphela ngokuhlelwa kwangaphambili, njengoba lena futhi kuyindawo yokuphumula yangasese. Ifenisha yasengadini, amalounge, namapharasoli ayatholakala.
Ifulethi lihlome kahle kakhulu! Isitofu esifakwe amathayela sikhiqiza ukufudumala okupholile ngesikhathi esipholile.
I-inthanethi itholakala nge-WLAN. I-42 "3D TV ehlanganisa isistimu ezungezile ye-DOLBY, isidlali se-BlueRay 3D nosizo lomamukeli wesathelayithi esimweni sezulu esibi.
Abazali bami bahlala esizeni futhi bayakujabulela ukungisiza nganoma imiphi imibuzo. Ngokuvamile angikho lapho mina.
Hlola ezinye izinketho ezise- Wies namaphethelo